IIBHLOKO EZILI-12 ZOKUSEBENZA ZABANTU ABAFUNDILEYO - IMVELISO
Iibhloko ezili-12 zokuSebenza zaBantu abaFundileyo
I-Smart ikrelekrele. Oko kuyacaca. Kodwa wenza njani ukuba ube smart? Uziguqula njani ube yininja yemveliso? Ngokubanzi, abantu abakrelekrele banemveliso. Umbuzo-uba njani ulumkile kwaye uvelise imveliso? Zininzi iindlela, kodwa enye yezona zinto zilungileyo yimfundo. Zifundise ubuchule kunye namacebo okuqaqamba kunye nemveliso. Ewe, ukuba ufuna ukuba nobukrelekrele kunale nto uyiyo ngoku, kufuneka uqale ngokungasebenzisi inkcitho eninzi. Enye yeendlela ezilungileyo zokwenza oku kukufunda iwebhusayithi. Iindawo ezininzi zibonelela ngesiqulatho sasimahla ukufikelela kwiinjongo zakho zokuziguqula ube ngumntu olumkileyo kwaye okrelekrele ngakumbi. Iindawo ezininzi zibonelela ngesiqulatho sasimahla ukufikelela kwiinjongo zakho zokuziguqula ube ngumntu olumkileyo kwaye okrelekrele ngakumbi.
Kule posi, siza kugubungela i-12 iibhlog zemveliso ezikrelekrele omele ukuba uzifunda. Ndiyazithanda ezi bhlog. Ndichithe ixesha ndizifunda, kwaye andizisoli nakanye. Baye bandinceda ukuba ndifunde ngakumbi malunga nemali yobuqu, imveliso, ukubeka iinjongo, ukwenza imikhwa elungileyo, GTD , ulawulo lwexesha, kunye nezinye izifundo ezixabisekileyo.
I-blog ka-Steve Pavlina icetyiswa ziintlobo ezininzi zophuhliso lomntu njengam. Ukuba kukho into esiyibiza ngokuba ngumntu ojikeleze kakuhle, iblogi yakhe efanelekileyo. Ubhala malunga nemveliso, ubudlelwane, imali, umsebenzi, impilo, ukukhula komntu, imikhwa kunye nokomoya. Eyona nto indibethayo ngesitayile sikaSteve ubhala ngezifundo kunye neengcebiso ezisekwe kumava akhe, kwaye kum, inamandla.
indlela yokufumana kwakhona idatha kwifowuni eyaphukileyo
Enye yeebhlog ezinkulu zokuvelisa kunye nenye yezona zikrelekrele. I-Lifehack igubungela indlela yokuphila, unxibelelwano, imali, imveliso, itekhnoloji kunye nomsebenzi. Ezi zihloko eziphambili, kodwa inezinto ezingaphantsi kwesihloko ngasinye. Olunye lweempawu eziphambili zezithuba zesiza kukuba babenokwabiwa phakathi. Abanikeli ababhali bayayithanda inyani yokuba abaphulaphuli babelana ngento abacinga ukuba ibalulekile kwaye inokwenziwa. Ngokomntu ndiye ndazuza kwisakhono sikaLifehack sokubamba ubumnandi babafundi kunye nokukwazi ukubakhuthaza ukuba babelane ngomxholo. Kuya kufuneka ndibonise, nangona, ukuba abaphulaphuli abawufumani umxholo ogqwesileyo, ngekhe babelane nge-intanethi. Njengoko ufuna ukuxelela!
Abanini bashwankathela i-Lifehacker ngolu hlobo: Iingcebiso, amaqhinga, kunye nokukhutshelwa kokwenza izinto. Ndiqinisekile ukuba uyifumene inqaku! Kulapho unokufumana naluphi na uhlobo lweengcebiso, kunye namaqhinga, kunye nokukhuphela okunokukunceda wenze nantoni na ofuna ukuyenza. Iqela lewebhusayithi lihlele izihloko ngale ndlela: Ukhuphelo (okanye ngakumbi, Ukhuphelo lweWindows , Ukhuphelo lweMac , Ukhuphelo lwe-iOS , kunye Ukhuphelo lwe-Android ), IWindows , I-OS X , Linux , I-Android , ios , kunye Ifowuni yeWindows , Kwenziwa kanjani , DIY , kunye nokuninzi.
Ngamazwi omnini, uJay White, le ndawo imalunga nemveliso, ukugqitha kweenjongo, ukuzenzekelayo, kwaye, ke, ukufumana indlela elula yayo yonke into. Iindidi zibandakanya ukonwaba, impumelelo, imali, indlela yokwenza, ubomi hacks, impilo. Ngokuqinisekileyo uyakonwabela ukufunda ngakumbi ngale ndawo. Qala nge Isidenge somntu malunga nephepha . Kwaye ukujonga nje kwiphepha lasekhaya, uya kubona ukuba i-DLM ineqela elungeleleneyo lama-niches. Kum, ngenxa yokuba ndiyiblogger enomceli mngeni kwezobuchwephesha, ndifumana ukuba iitos zokwenza njani iteknoloji iluncedo. Yiya, ujonge, ukuba awukabikho. Awuyi kuchitha ixesha lakho.Intengiso
imibuzo enzulu ibuze enye ebalulekileyo
Yiba nobutyebi kancinci
Ukuba ufuna ukufunda indlela yokulawula iimali zakho zobuqu kakuhle kwindawo yakho yiTyeba kancinane. Indawo ithiwa igama eyona blog ibalaseleyo Ixesha kwiphephancwadi kwaye eyona blog ikhuthazayo yemali ngu Imali kwiphephancwadi . Inikezelwe ezemali zobuqu ezinengqiqo . Imixholo egutyungelweyo kukuPhononongwa kweBhanki, ezona ziseko, iiHacks zeMali, ukuTyala imali, ukungabinamali, ukuSebenza, ukuGcina imali, uHlahlo-lwabiwo mali, iimoto, umhlala phantsi kunye namatyala. Kukho okungakumbi, kodwa kuya kufuneka utsibele ngaphezulu kwisiza ukuze uyiqonde ngcono.
Ukuba ukhangele iblogi engakufundisa ukuba uhlakulele imikhwa elula yokutshintsha ubomi bakho bube ngcono, ndincoma iblogi eyaziwayo kaLeo Babauta, iZenzo zeZen. Ixesha leMagazini livotele njengenye yeeBlogi eziPhambili ze-2010. Esi sizathu esihle sokuba ukhangele iblogi yakhe. Into endiyithandayo ngale bhlog kukuba isebenzisa indlela elula yokuchaza iindlela zokufumana imikhwa enokubangela ukuba ube ngumntu onemveliso ngakumbi kwaye ube ngumntu ongcono.
Isonka Esilumkileyo Iqonga lezeMali lobuqu
Malunga nephepha lendawo yohlobo lweseti yokuseta imo yokufunda yomfundi ngexesha lotyelelo lokuqala. Ukujonga isonka esiLumkileyo malunga nephepha oza kulifunda: Isonka esisilumko luluntu lweebhlogi apha zokukunceda uphile enkulu kuhlahlo-lwabiwo mali oluncinci. Ngaphandle kwento osenokuba uyivile, awunyanzelekanga ukuba uncame inkululeko yakho yemali ukonwabela ubomi. Emva kokufunda isingeniso esifutshane, ndiqinisekile kwaye ndakhuthazwa ukuba ndiyikhusele ibhlog. Indawo yandifumana ekuhlaleni okukhulu kuhlahlo-lwabiwo mali oluncinci. Ngubani ongayinqweneliyo loo nto? Izihloko ezigutyungelweyo ngamakhadi etyala, ezemali, ezokuphila ngendlela engalunganga, umsebenzi, iiHacks zoBomi, ezona ntengiselwano zibalaseleyo, (kwaye uyakholelwa okanye awukho, banazo nezinye iiblogi zezeMali zaBantu).
Ukuqala kwam ukutyelela le bhlog intle kangaka, ndabanjwa ndingazi ukuba nditsalelwa kufutshane kwaye ndisondela ukujonga yonke into ngayo, kwangoko. Ayisiyiyo kuphela ngenxa yokuba iyinxalenye yophando lwam, kodwa ngenxa yokuba inento endingenakuyihoya: ukunyaniseka. Ngaphezu koko, inyanisekile ekuncedeni abantu abakwishishini lokudala kunye nokugqiba iiprojekthi nokuba zinkulu okanye zincinci kangakanani.
Imveliso501 yibhlog egxile ekunikezeleni iingcebiso kunye namacebo okukunceda wandise imveliso yakho yobuqu. Kuba inyani ifuna ukwenza loo nto, eyona nto iphambili kuyo yinto ephambili, ke ngokuthe ngcembe icotha kunezinye iisayithi ezinokuposa; igxila kumxholo wokuqala kuphela. Ibhlog yenza konke okusemandleni ayo ukuza neposti enye qho ngeveki. Nangona kunjalo, ibhlog kugxilwe ekuboniseni into eya kuthi ngokuqinisekileyo izuze abaphulaphuli. Inye into eyahlula kwezinye iiwebhusayithi zemveliso kukuba ineChannel yayo yeYouTube eneengcebiso kunye namacebo. Ibhlog ikwahlala ibandakanya iingcebiso zobuchwephesha kwizithuba zabo ezibonakalayo. Ngale ndlela, ubuchwepheshe bucelomngeni kubafana njengam banokuba nosuku lwentsimi ngalo lonke ixesha betyelela uMveliso501.Intengiso
Ingcwele yemihla ngemihla
Ijolise ekuncedeni iingcali ukuba ziququzelele kwaye ziphucule ukulawulwa kwexesha ukuze bakwazi ukwenza izinto ezininzi kunye nokwenza ifuthe elikhulu. Ikwabekiwe ukubanceda ukuba bafumane ulwaneliseko ngakumbi, kunye nokuguqula umbutho wabo ube ngcono. Le bhlog iyazahlula kwabanye ngokutya kwimibutho nayo, endaweni yokuzikhawulela ekuncedeni abantu kuphela. Inqaku elongeziweyo sisihloko, ubunkokeli. Uninzi lweebhlog zemveliso zigubungela ubunkokeli kodwa iDaily Saint iyifaka kwifayibha yayo ephambili.
Idesika yoMyalezo kaIan
Ukukhangela iblogi ejolise kulawulo lwexesha kunye nophuhliso lomntu aluzange lube lula. Cofa nje igama lebhlog apha ngasentla kwaye uza kungena, pronto. Nje ukuba ungene ngaphakathi, uyazi ukuba awusoze uphinde ube nedesika enezinto ezingcolisayo. Ewe, oko kukuthi, ukuba ulandela iingcebiso ezinikezelwa apho. Kanye kwiphepha layo, uqinisekile ukuba awuzukufumana kuphela iingcebiso zokuzinceda kodwa ube ngumxhamli ekufundiseni, ekuqeqesheni, ekwabelaneni nasekucebiseni. Ke, ukuba uziva ukuba ubambekile kwenye indawo awukhululekanga kuyo, okanye ufuna i-Push encinci ukushiya apho ukhoyo, zive ukhululekile ukuhamba uye kwi-IMD. Kukuhamba okuhle. Thatha kumhlobo wakho, u-Anthony (mna).
indlela ekhawulezayo yokufumana ubutyebi
Phakathi kweziza apha, le inekona eyahlukileyo. Kusuka kwimbono katitshala. UBert Webb, umnini, uchithe malunga neminyaka eli-19 yobomi bakhe kwizifundo emenza akwazi ukuza neengcebiso zobulumko malunga nolawulo lwexesha, imveliso kunye nokuziphucula. Ukulahla kwindawo kwaye uza kubona izihloko ezinje ngokuphucula izakhono zokubhala, unxibelelwano olusebenzayo, intetho ezinamandla, ukuphucula ukuqhubeka kwakhona, nokunye okuninzi. Kwahluke kakhulu kwezinye iibhlog zemveliso kuba izifundo zixoxwa ngobulumko bukatitshala. Mna nabahlobo bam abaziingcali ngemveliso sincomela ezi bhlog.
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: UVIKTOR HANACEK nge picjumbo.com
imifanekiso yamadoda nabafazi
olona ncomo kumhlobo
Ngaba iimbotyi zombona azilunganga kuwe
imisebenzi isebenza ekhaya kwi-intanethi
ilamuni kunye nelamuni izibonelelo zamanzi
Imac Umsebenzi Wohlahlo Lwabiwo-Mali Itekhnoloji Ye-Smartphone 2 Amandla Engqondo Inkcubeko